Fiarovan-tena mavesatra amin'ny tendrony avo lenta ho an'ny semiconductor China Manufacturer
Description:Fiompiana ambany ho an'ny semiconductor,Tafahoatra ny tebiteby ambany ho an'ny semiconductor,Mivarotena ny tavy ambany
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Fitaovana fanadiovana ho an&#39;ny Semiconductor > Fiarovan-tena mavesatra amin&#39;ny tendrony avo lenta ho an&#39;ny semiconductor
Hydrofluoroether Low Tension and Viscosity Demiconductor Detergent
Hydrofluoroether filaminana Elektronika Grade dia miala amin'ny sarimihetsika mahaleotena miaraka amin'ny toetra voajanahary tsara sy hafanam-po izay manome alalana amin'ny fananganana, fanoherana, fanindrahindrana, ary fananganana fananganana ka mahatonga azy io ho an'ny fampiharana maro amin'ny electronics. Ny vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana izany, izay sady tsy misy loko no sady tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy misy mampidi-doza ary mitoka-monina. Ny hydrofluoroether cleaning agent dia tsy fahampian-tsakafo avo lenta amin'ny dielectric, ny tebiteby ambany dia ambany, ny hodi-jiro ambany, ny tsy fahampian-tsakafo tsy misy fialana ary ny fahamendrehana tsara. Ny HFE hydrofluoroether dia mety hiparitaka sy hiparitaka amin'ny rindrin'ny fitaovam-panafody sy ny poreau isan-karazany, ary misy vokany tsara amin'ny famonoana, ny fampangatsiahana, ny famafazana sy ny fanadiovana. Ny vahaolana fanadiovana HFE dia manana tsiranoka maromaro kokoa, ary azo ampiharina amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany. Ny hexafluoropropyl methyl ether dia ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy, ny solika, ny LCD ary ny sarotra sns., ary azo ampiasaina ihany koa mba handotoana sy handotoana, fanandramana amin'ny fanodinana elektronika na fisedrana amin'ny rivotra, ary solvent.
Hfe Inert Fanadiovana Agent fonetika physiquechemical:
Ity Agents ity dia fitaovana amin'ny Hydrofluoroether. Ny vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana izany, izay sady tsy misy loko no sady tsy misy poizina ary tsy mampidi-doza , ary mitoka-monina. Azo ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra izy io, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy samihafa, ny semiconductor, ny LCD ary sarotra disk etc., ary azo ampiasaina koa mba handotoana ary fanadiovana , fanandramana fitetezana elektronika na fitiliana fohy, ary solvent.
Fiompiana ambany ho an'ny semiconductor Tafahoatra ny tebiteby ambany ho an'ny semiconductor Mivarotena ny tavy ambany